म’रेको २७ दिनपछि नीतू हिड्दै घर पुगेपछि परिवार परे चकित - Hot Post News
Wednesday, February 19News That Matters
म’रेको २७ दिनपछि नीतू हिड्दै घर पुगेपछि परिवार परे चकित
October 9, 2019 by onlinenews
सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ काेही म रिसकेकाे ब्यक्ती फेरी हिँड्दै हिँड्दै घर फर्कियाे भन्दा कुनै फिल्मकाे दृश्यमा जस्तै लाग्ने एउटा समाचार बाहिरिएकाे छ । भारतीय सञ्चार माध्यम अाजतकले लेखेकाे समाचार अनुसार नोएडामा एक २५ बर्षिय महिलासँग यस्तै अचम्मको घटना घटेको छ ।
परिवारले उनलाई म रेको सम्झेर दाहासंस्कार गरिदिएको थियो । तर २७ दिनपछि उनी हिडदै घर आईन । परिवारलाई यो निक्कै ठुलो आश्चर्यको बिषय बनेको थियो । पहिले त उनका अभिभावकलाई विश्वास लागेको थिएन जस्को उनीहरुले दाहसंस्कार गरेका थिए उनै अगाडि आउँदा की यो तिनै नीतू हुन् भनि जस्ले सास लिदै थिईन र जिउँदो थिईन् ।
घटना यस्तो थियो नीतू आफ्नो घर देखी हराईन् । परिवारले प्रहरीमा निवेदन दिए । प्रहरीले नीताको श्रीमान् राम लखनमाथि शंका गर्‍यो । पछि प्रहरीले राम लखनलाई दोषी पाएन । नीतूको परिवारलाई एउटा मृ त शरीर देखाए जुन नोयडाको सेक्टर ११५ मा भेटेका थिए जस्को शरीर पुरै डढेको थियो ।
परिवारलाई उक्त शरीर नीतूको जस्तोलागेको थियो । प्रहरीले डिएनए स्याम्पल नजाँची सहजै सो श व दिएको थियो । परिवारले अन्तिम संस्कार गरेको थियो । तै पनि प्रहरीले सत्य पत्ता लगाउन घटनाको अनुसंधान गरिरह्यो ।
पछि प्रहरीले यो पत्ता लगायो की नीतू एटामा बस्ने एक व्यक्ति पुरणसँग बस्दै छ भन्ने । नीतू त्याहाबाट ५ तारिख भागेको पनि पत्ता लाग्यो । नीतू परिवार भएको ठाँउमा पुगिन । अहिले प्रहरी जस्को दाहसंकार भएको थियो उस्को पहिचान गर्न अनुुुसंधानरत छन् ।
Prevयि ३ राशिका युवती हुन्छन् लोभ्याउने खालका,
nextहरेक दिन पतिको दीर्घायुको कामना गर्दैै मन्दिरमा दैनिक पूजाआजा गर्छु, तर उहाँ
”अलिकति आगोले पोल्दा ७ दिनसम्म गनगन गर्थी, अहिले त्यत्रो आगोले पोल्दा पनि किन बोल्दिन्स” भन्दै भक्कानिए प्रकाश
कोरोनाभाइरस बारेमा जान्नु पर्ने यी कुराहरु, यसबाट कसरी जोगिने ? – डा. कल्याण सुवेदी
ठाडो भिरमुनी यि महिलाको अचम्मको काम, एक दिनमा नै गर्छिन् १० हजार बढी आम्दानी (भिडियो)
हे भगवान यस्तो के भयो ? १७ बर्षीय युवतीले बिबाह नगरी बच्चा जन्माएपछि यस्तो बिजोक (भिडियो सहित)